Telegram dia nohavaozina miaraka amin'ny fanatsarana ny Pasipaoro sy ny fampandrenesana | Androidsis
Telegram dia havaozina indray. Ny fampiharana fandefasan-kafatra malaza, toy ny mahazatra, dia manome fanavaozana vaovao. Ity no kinova 4.91 azy, izay miaraka amina andiam-panatsarana vaovao. Ireo dia fanatsarana amin'ny lafiny rehetra, izay misy ihany koa ny Passport, ny zava-baovao farany ananantsika amin'ny fampiharana hatreto.
Amin'ity fanavaozana vaovao ity dia te-hanohy hampiseho ny antony iheverana ny maro ho fampiharana fandefasan-kafatra tsara indrindra ny Telegram. Fampisehoana vaovao sy fanamboarana bibikely no lakileny. Inona no azontsika antenaina amin'ny kinova vaovao an'ny fampiharana?
Amin'ity tranga ity, ny habetsaky ny fanatsarana ampidirina dia kely noho ny amin'ny tranga hafa. Saingy ireo no fanatsarana izay nandrasan'ny mpampiasa azy, satria nisy ny olana sasany taloha. Ka ireo izay mampiasa Telegram dia tokony ho afa-po amin'ireo fanovana ireo.
1 Fanatsarana ny pasipaoro
2 Fanatsarana ny fampandrenesana
3 Fanatsarana ny kinova desktop
Fanatsarana ny pasipaoro
Ny serivisy fitehirizana antontan-taratasy dia tsy nanomboka fanombohana, satria hita fa tsy azo antoka toy ny nanaovan'ilay orinasa doka. Noho io antony io dia nampiditra fanovana amin'ity orinasa ity ny orinasa, mba hampisehoana fa tena serivisy azo antoka izy io. Ho an'ity, nanova ny algorithm hashing ny teny miafiny.
Midika izany fa nanatsara ny algorithm tompon'andraikitra amin'ny fitahirizana teny miafina i Telegram. Ny fanaovana an'io fomba io dia milamina kokoa. Zava-baovao iray hafa manan-danja ao amin'ny Passport ny fitomboan'ny isan'ireo antontan-taratasy ekena. Karazana antontan-taratasy vaovao no hekena, anisan'izany ireo izay nadika. Noho izany dia afaka mitahiry karazana hafa maro ao ianao.
Fanatsarana ny fampandrenesana
Ny fiovana lehibe amin'ny fampiharana toy izany dia tonga amin'ny fampandrenesana. Manomboka izao, mpampiasa afaka manampy maningana izy ireo amin'ny fampandrenesana. Midika izany fa raha nanapa-kevitra ny hangina ny fampandrenesana rehetra voarainay tao Telegram izahay, dia afaka manampy maningana ary manao fampandrenesana momba ny mpampiasa manokana azontsika raisina.
Noho izany, mila mandeha any amin'ny fikirana fampiharana isika. Ho hitantsika fa efa nampidirina ny fizarana antsoina hoe faningana, izay hahafahantsika mitantana ireo fampandrenesana ireo. Ny hevitra dia ity fomba ity, ireo olona izay matetika miresaka matetika aminao, dia hanohy hivoaka amin'ny fampandrenesana. Ho vitanao ny mitantana ny zava-drehetra araka izay itiavany azy amin'ny fampiharana.
toy ny amin'ireto fanavakavahana ao Telegram ireto dia nisy safidy iray namboarina. Misaotra an'io fa ilay mpampiasa no hitantana ireo fampandrenesana ireo amin'ny fomba heveriny fa mety.
Fanatsarana ny kinova desktop
Tsy ny fampiharana finday Telegram ihany no nametraka fanovana. Ireo mpampiasa mampiasa ny kinova birao dia hahazo vaovao ihany koa. Ny voalohany dia fanatsarana miavaka amin'ny lohahevitra andro aman'alina mitovy amin'izany. Ankehitriny izy ireo dia miasa tsara kokoa ary samy hafa be, idealy raha te hampiasa ilay fampiharana amin'ny alina isika nefa tsy mila mampiasa jiro.
Ankoatra izany, ampidirina fiasa iray ahafahantsika mandefa resaka amin'ny fampiharana. Vaovao tsara raha te-hitahiry fifanakalozan-kevitra vitsivitsy ianao, miaraka amin'ity fiasa vaovao ity dia ho mora kokoa ny fanatanterahana izany.
Ny fanatsarana ny fiarovana natolotry ny Telegram sy Passport Izy ireo koa dia mahatratra ny kinova desktop an'ny fampiharana. Tsy mila hiandry fotoana fohy ianao vao hanana azy ireo. Ka ny mpampiasa rehetra dia hanana ny fanatsarana farany amin'ity sehatra ity. Vaovao mahafaly izay mampiseho ny fiasan'izy ireo haingana amin'ny sehatry ny fiarovana.
Efa niitatra sahady ny kinova Telegram, 4.91 vaovao. Navoaka ny fanavaozana, noho izany dia azo inoana fa efa nandray azy io ianao tato anatin'ny ora vitsivitsy, na efa ho azonao. Ho tonga amin'ny alàlan'ny OTA izany, ka tsy mila manao na inona na inona ianao, miandry fotsiny ny fahatongavany. Ahoana ny hevitrao amin'ny vaovao tonga tamin'ny fampiharana?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Telegram 4.91: Fanatsarana ny pasipaoro ary fampandrenesana tsara kokoa
Ny Google Pixel 3 dia haseho amin'ny 9 Oktobra
Fanjonoana amin'ny Fanjonoana Fanjonoana, ny safidy malalaka amin'ny Fanjonoana Mampihomehy